တရုတ်-ဥရောပကုန်တင်ရထားက ကျိန့်ကျိုး၊ ဟနွိုင်း၊ လိဂျ် မြို့များအကြား ပထမဆုံး ချိတ်ဆက် - Xinhua News Agency
လိဂျ်၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-ဥရောပကုန်တင်ရထားဝန်ဆောင်မှုသည် ကျိန့်ကျိုး၊ ဟနွိုင်းနှင့် လိဂျ် မြို့များအား ပထမဆုံးအကြိမ် ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အာရှနှင့် ဥရောပကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ဖန်တီးပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ လိဂျ်မြို့ရှိ Liege Logistics Intermodal ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတွင် တရုတ်-ဥရောပကုန်တင်ရထားမှ ကုန်စည်ကုန်သေတ္တာ အောက်ချနေသည်ကို ဩဂုတ် ၃၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါရထားဝန်ဆောင်မှုသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ကုန်စည်အချို့တင်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တရုတ်-ဗီယက်နမ်ရထားဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့မှ တရုတ်နိုင်ငံ ကျိန့်ကျိုးမြို့သို့ ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကျိန့်ကျိုးနှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ လိဂျ်မြို့တို့ဆက်သွယ်မှုရှိသော ကုန်တင်ရထားထံ လွှဲပြောင်းတင်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
China-Europe freight train marks 1st connection between Zhengzhou, Hanoi, Liege
LIEGE, Sept. 1 (Xinhua) — A China-Europe freight train service is linking Zhengzhou, Hanoi, and Liege for the first time, creating good opportunities to develop the collaboration between Asia and Europe.
It is introduced that some goods on the train come from Vietnam. They first took the China-Vietnam train from Vietnam’s Hanoi to China’s Zhengzhou. Later they were transferred to the freight train linking Zhengzhou and Liege in Belgium.
1- -5- A staff member unloadsacargo container fromaChina-Europe freight train at Liege Logistics Intermodal in Liege, Belgium, Aug. 31, 202. (Xinhua/Zheng Huansong)